I-BWA022-DEMS07-SET - Uhlelo lwe-OMG Digital Evidence Management lweBWC090 & BWC089 - OMG Solutions
I-BWA022-DEMS07-SET - Uhlelo lwe-OMG Digital Evidence Management lweBWC090 & BWC089
Isoftware ye-OMG Digital Evidence Management System
The Uhlelo lwe-OMG Digital Evidence Management yenza lula inqubo yokuqoqwa kobufakazi ngokuxhuma nokugoqa amasilinda wedatha atholakalayo kusixhumi esibonakalayo esisodwa. Inikeza isitolo esisodwa sokuqoqa ubufakazi - umphenyi akudingeki angene kumasistimu ahlukile noma ahambele izindawo ukuze aqoqe ubufakazi mathupha.
Akukho lutho olungabamba izinhloko zezindaba njengezingxoxo ezimbi phakathi kwephoyisa kanye nelungu lomphakathi. Sekuyiminyaka eminingi kakhulu, umphumela wokusetshenziswa kwamaphoyisa kuye kwaba ngaphansi kokuthi "uthe, wathi" ingxabano. Ngokusungulwa kwamakhamera wevidiyo amancane aphakeme, kodwa iminyango yamaphoyisa manje inendlela yokuxazulula lezi zingxabano. Ngcono nakakhulu, zingavimbela ukuba zingenzeki kuqala.
Imiphakathi ezungeze izwe idinga ukuthi amaphoyisa azogqoka amakhamera omzimba, futhi ngesizathu esihle. Ngamakhamera womzimba erekhoda konke ukusebenzisana kwesiphathimandla, umnyango wamaphoyisa kanye nomphakathi ukuthi ukhonza ungathola ukuthi kwenzekani kuzo zonke izigameko.
Lapho wonke amaphoyisa emnyango ewagqoka lawa makhamera, inani lezikhalazo zomphakathi liyehla kakhulu, njengoba kunjalo nenani lamaphoyisa okudingeka asebenzise amandla. Bavele benze ukuphendula okudingekayo kubo bonke abathintekayo abathintekayo ukuze baqonde ukuthi konke abakwenzayo kubhalwa ukuzala.
I-OMG Digital Evidence Management Software [ODEMS]
Yonke iminyango inendlela yayo yokwenza izinto, futhi ubuchwepheshe obusha akufanele buphoqe ukuthi usebenze ngendlela ethile. Noma ngabe ufuna ukufinyelela kuvidiyo, gcina idatha noma uphathe yonke imininingwane yokuthi isetshenziswa kanjani.
Ukuze la makhamera abe usizo, kumele akhonzwe yi-software efanele yokuphathwa kobufakazi be-digital, owaziwa nangokuthi i-DEMS. Le software isetshenziswe ngezindlela eziningi ukuqinisekisa ukuthi konke ukurekhoda kwekhamera yomzimba kubhalwe futhi kugcinwe kahle. Kunamaphuzu amaningi wedatha okufanele aqoshwe ngokunembile. Isibonelo, isofthiwe yethu inga:
- Landela ukuthi yiliphi iphoyisa eliqophe ividiyo nokuthi iqoshwe ngasiphi isikhathi
- Gcina imethadatha yakho konke okurekhodiwe, njengokuthi imaphi amalungu omnyango awubukile futhi nini
- Vumela ukumaka amavidiyo njengobufakazi kuphenyo oluqhubekayo noma ngenxa yesitoreji esilula
- Nikeza ummeli wesifunda sakho kanye nabasebenzi babo ikhono lokungena ngemvume futhi babuke amavidiyo abalulekile
Izinzuzo zemikhiqizo ye-Tracker EMS
Kungakhathaliseki ukuthi ungumphathi wamaphoyisa ofuna izixazululo ezintsha noma umqondisi we-IT okumelwe asebenzise, ​​isofthiwe yokuphathwa kobufakazi be-digital kubalulekile ekwenzeni amakhamera omzimba asebenziseke. Ngaphandle kwalolu hlelo lokusebenza, ukutshalwa kwezimali kudivayisi yakho yekhamera eliphezulu ngeke kube nhlobo. Uhlelo lwethu lokuLawula Ubufakazi olunehlelo oludidiyelwe lobufakazi beDivaysi luhlukile ngoba lunikeza ubufakazi bobuciko kanye nobudijithali obonisa lonke uboshi lwesitokisi. Uzothola isisombululo sonke-in-one sokugcina uchungechunge lwezobufakazi bakho futhi ukwazi ukufinyelela nganoma yisiphi isikhathi lapho udinga khona.
Njengoba lokhu kungubuchwepheshe obusha, abathengi bangakhetha kuphela ku-OMG ngezidingo zabo zekhamera zevidiyo. Ngayo yonke ubuchwepheshe, ingaba yisikhathi ngokushesha. Uma ubuchwepheshe bungekho ngaphezulu kwe-line, kuzodingeka utshale imali eningi ukuthola amakhamera amasha nesofthiwe entsha ukuhamba nehardware entsha.
- Layisha nokufakazela ubuqiniso kwawo wonke amafayela edijithali afaka izithombe, ividiyo, umsindo, namanye amafayela
- Ukulayisha okuzenzakalelayo nokushaja
- Ukufinyelela okuphephile kuwo wonke amafayela edijithali
- Chain of custody for wonke amafayela digital
- Unlimited search amakhono
- Izihlungi ezingenamkhawulo nezihlungi ezisheshayo
- Isaziso sohlelo
- Izithombe nokubika zokunyathelisa amakhono
- Izendlalelo zokuphepha komsebenzisi
- Amafayela Susa Unlimited
- Amandla wokukhawulela anamandla wamacala abucayi naphakeme
Amandla okugcina: Cha, ukusekela ikhompyutha, sebenzisa i-hard disk yekhompyutha ukugcina ubufakazi
Isikhombimsebenzisi sokutholwa: Micro - i-USB * amachweba ayi-10 ajwayelekile
Inkinobho yokushintsha amandla: Inkinobho yomzimba * 1
Isikhombisi se-USB3.0: I-USB3.0 * 1
Isixhumi Samandla: I-AC IN: 220V; I-50Hz ngaphezulu kokuvikelwa kwamandla kagesi, ngaphezulu kokuvikelwa kwamanje, ukuvikelwa kwamandla, ukuvikelwa kwesifunda okufushane
Ukunikezwa kwamandla kagesi: Ukunikezwa kwamandla okwakhelwe ngaphakathi kwe-12V10A
Ukusetshenziswa kwamandla: ≤120W
Ukuphola Umhlobo: Umshini wokupholisa owakhelwe ngaphakathi we-12v * 1
Ukushisa okusebenzayo: -20 ℃ ~ 60 ℃
Ubukhulu (mm): Ubude 350mmm * Ububanzi 240mm * Ukuphakama 100mm
Isisindo somkhiqizo: Mayelana ne-5kg
Ukubuka okuphelele kwe-233 Ukubuka kwe-4 Namuhla